के एसईओ ले व्यापार बढाउन मद्दत गर्दछ? Semalt विशेषज्ञ बाट उत्तर
यसको लागि सरल उत्तर यो हो कि यसले लक्षित दर्शकहरू द्वारा साइट अनलाइन दृश्यता सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। अधिकांश व्यक्तिहरू पहिले वस्तुहरू र सेवाहरू फेला पार्दछन् जुन खोजी ईन्जिनहरूमा क्वेरीहरू गरेर उनीहरू अनलाइन खोजी गरिरहेका छन्। तसर्थ, यदि एकले खोजी मापदण्डसँग मेल खान्छ, वेबसाइट परिणामहरूको सूचीमा देखिन्छ। ईमेल, सामाजिक मिडिया, र टिभी वा रेडियोको विज्ञापन प्रयोग गरी ब्रान्ड मार्केट गर्ने अन्य तरिकाहरू छन्। अन्य मार्केटिंग फारामहरूबाट एसईओको भिन्नता यो हो कि एक साइट मालिकले उनीहरूको उत्पादनहरू र सेवाहरूको विज्ञापन गर्न पाउँदछ जुन उनीहरूलाई खोजी गर्दछ। साथै, एसईओ ले लक्षित दर्शकहरूलाई उनीहरूले के पाउँछन् नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ, के उनीहरू चाहन्छन्, र जब उनीहरू यसलाई चाहन्छन्।
विज्ञहरूले दावी गरे कि त्यहाँ एसईओईकोलागि कुनै ग्यारेन्टीहरू छैनन्, यो व्यावसायिक एसईओ विक्रेतालाई समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले सफलताको सम्भावना र आरओआई सुधार गर्दछ।
यो एक आपूर्तिकर्ता संग कुरा छैन एक कि काम गर्न इच्छा, वा एक पेशेवर एसईओ कर्मचारी लेना, अलेक्जेन्डर Peresunko, ग्राहक को सफलता प्रबन्धक Semalt लागि बाहिर हेर्न कुराहरू वर्णन:
१. सफल कार्यान्वयनको लागि अनुभव अनुभव
हाल, त्यहाँ बजारमा धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले SEO को भाषा बोल्छन् वा बुझ्दछन्। जे होस्, त्यहाँ कुनै उद्योग स्वीकार्य तरीका छैन वा मूल्यांकन गर्ने कुनै मान्यता प्राप्त विधि छैन कि कुनै व्यक्ति एसईओ मा महान् छ वा छैन भनेर उनीहरूले दावी गर्छन्। एक कुञ्जीले कुञ्जी शव्दहरूको हालको उदाहरणका उम्मेदवारलाई सोध्न अवसर लिन सक्दछ, वा विक्रेतालाई सिफारिशहरू प्रदान गर्न अघिल्लो कम्पनीहरूले। अन्त्यमा, कम्पनीले एक व्यक्तिसँग समाप्त गर्दछ जसले एसईओ धेरै पटक गरेको छ, र यसको बारेमा जाने कसरी जान्ने भनेर दावी गर्ने व्यक्तिहरूसँग होइन।
२. सबै ट्रेड प्रोफेशनल्सको ज्याक
मार्केटरहरू आफूलाई डिजिटल मार्केटि like समावेश सबै चीजहरूमा एक विशेषज्ञ भएकोमा गर्व गर्न चाहन्छन्। भन्दा बढि पटक, प्रायः एसईओ विज्ञहरूसँग यो विशेषता स्वामित्व हुन्छ। यसका लागि थप, कम्पनीहरूले लाभदायक पाउनेछन् कोहीलाई डिजिटल मार्केटिंगमा व्यापक विशेषज्ञता भएको, उनीहरूको लागि बहुमूल्य। जब एसईओ मार्केटिंगको विशेष कोशिको लागि कसैलाई काममा लिने कुरा आउँदछ, कसैलाई भाँडामा लिनु बुद्धिमानी हुनेछ किनकि यसमा स्पष्ट रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कुनै व्यक्तिलाई साइट मालिकले पूरा गर्न चाहेको कुरा ठ्याक्कै गर्ने अनुभवमा बढी हात हुने सम्भावना छ।
Exper. विशेषज्ञहरू जसले ग्यारेन्टीहरू प्रस्ताव गर्दछ
धेरै विक्रेता र स्वयं घोषणा विज्ञहरु ग्राहकहरु लाई भन्छ कि SEO को उपयोग गर्दा कुनै ग्यारेन्टी छैन। शाब्दिक अर्थमा यो सत्य हो किनकि इन्टरनेट बन्द गर्न सकिन्छ, वा खोज इञ्जिनहरू हराउनेछन्। जे होस्, यी असम्भवको नजिक छन्। यस्तै दुर्लभ अवसरहरू बाहेक, त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन पेशेवरहरूले उनीहरूको ग्राहकहरूको लागि उचित अपेक्षा र ग्यारेन्टीहरू प्रस्ताव गर्नुपर्दछ। त्यस्तै, जब एक पेशेवर विक्रेताको लागि खोजी गर्दै, प्रतिबद्ध गर्न इच्छुकको साथ काम गर्न दबाव दिनुहोस् जसरी उनीहरू फिर्ताको लागि वित्तको साथ ग्यारेन्टी चाहन्छन्।
Other. अन्य व्यक्तिको विचार र अनुमानमा निर्भर गर्दै
एउटाले गर्न सक्ने सबैभन्दा नराम्रो कुरा विक्रेता भाँडामा लिनु हो जुन सोच्ने नेताहरूमा भर पर्छ। यो होइन कि तिनीहरू मूल्यवान छैनन्, केवल मालिकहरू होशियार रहन आवश्यक छ। कुनै उपकरण र स्रोतहरू उपलब्ध छन् कुनै पनि कुञ्जी शब्दका लागि outrank को उत्तम तरिका मा सूचित गर्न पर्याप्त छ, यो तथ्यहरु छन् भने अरु मानिसहरु मा निर्भर गर्न बेकार छ।
विशेषज्ञको बाहेक अरू केहि पनि सम्झौता नगर्नुहोस् जब यो एसईओको आउँदछ। यदि एउटाले उनीहरूलाई सँभाल्न सक्दैन भने सस्तो डिजिटल मार्केटिंग रणनीति खोज्नुहोस्। एसईओ ले समय दिएमा आकर्षक रिटर्न उत्पादन गर्दछ। विक्रेता छनौट गर्दा माथिका चार बुँदाहरू सम्झनुहोस्।